Azigcini ngokumbovula zibuye zimehlulele | Bayede News
Home/ Ipolitiki/Azigcini ngokumbovula zibuye zimehlulele
Azigcini ngokumbovula zibuye zimehlulele
UMVIKELI WoMphakathi u-Advocate uBusisiwe Mkhwebane ubhekene nenkinga yokuzihlangula embonweni omveza njengomuntu ohlulwa ukwenza umsebenzi wakhe. Mhla zili-16 kuMfumfu kowezi-2016 amalungu ePhalamende avumelana ngesincomo esithi owayenguMengameli uMnu uJacob Zuma aqoke u-Advocate u-Advocate uMkhwebane njengozongena ezicathulweni zika-Advocate uThuli Madonsela owayeseshiya kulesi sikhundla ngenxa yokuphela kwesikhathi senkontileka yakhe njengomvikeli womphakathi waseNingizimu Afrika. IDemocratic Alliance kuphela emaqenjini asePhalamende eyayingakunambithisisi kahle ukuqokwa kuka-Advocate uMkhwebane njengoba yayimsola ngokuba yimpimpi yaseNingizimu Afrika ngesikhathi esazinze eRussia. Nakuba kwakuyiDA kuphela eyayingeneme ngokuqokwa kwakhe, kodwa akuwathathanga sikhathi amanye amaqembu ukuthi amjikele.
Esontweni eledlule u-Advocate uMkhwebane udalule abangama-38 abayishaya indiva imibiko kanye nezincomo zakhe. Uphinde waveza nokuthi bangama-21 asebedlulisele le mibiko ezinkantolo kanti yena angakwazi ukuziphendulela kweyi-13 kuphela njengoba iHhovisi lakhe lingenayo imali eyanele yokuziphendulela kuyona yonke imibiko edluliselwe ezinkantolo. Udalula lokhu nje ziyishumi izinsuku iDA izame yehluleka ukunxenxa ozakwabo ePhalamende ukuthi bavumelane ngokungabethembi ubuholi bakhe.
Yize esindile kulokhu emizamweni yeDA yokumchitha kodwa kubonakala sebethathe uhlangothi abakupolitiki ngokusilungela kwakhe isikhundla sokwengamela iHhovisi likaMvikeli WoMphakathi. NgoMasingana wezi-2017 umholi we-Economic Freedom Fighters uMnu uJulius Malema waveza ukuthi emva kokusonga izandla kuka-Advocate uMkhwebane wangaphikisana nesicelo esafakwa enkantolo ngoMfumfu wangowezi-2016 ngowayenguMengameli uMnu uZuma kanye nowayenguNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu uMnu Des Van Rooyen sokuphikisana nombiko kaMvikeli WoMphakathi waphambilini u-Advocate uMadonsela neqembu lakhe likuhoxisa ukumeseka kwalo ekuqhoqhobaleni lesi sikhundla.
NgoLwezi wezi- 2018 uMkhwebane waba nomhlangano noGordhan ngodaba olwaluthinta isikhalo esafakwa uMnu uLebogang Hoveka owayenguMengameli eHhovisi labasebenzi kubaqoqi bentela iSouth African Revenue Service (Sars) ngowezi-2016 esasisola ukwenzelela kuGordhan ngesikhathi esenguKhomishana ngokukhipha impesheni aphinde ambuyise uMnu u-Ivan Pillay ngowezi-2010. Kulo mhlangano uMnu uGordhan waphuma enganeme okwamenza watshela abezindaba ukuthi u-Advocate uMkhwebane ubezomchithela isikhathi abengasisebenzisela ezintweni ezingcono. Le nkulumo yanezelela ekumngabazeni u-Advocate uMkhwebane kwazise ngaleso sikhathi kwakudume umbono wokuthi iHhovisi loMvikeli WoMphakathi selasetshenziselwa ukulwa izimpi zikaMnu uJacob Zuma.
Imibono yokungabethembi ubuholi buka-Advocate uMkhwebane yagqama kakhulu ngowezi-2017 ngesikhathi ekhipha izincomo ezazithi ibhange i-Absa kuzomele libuyisele kuHulumeni isigidigidi samarandi eyasinikwa uHulumeni wobandlululo, kanye nesasithi kuzomele kuguqulwe uMthethosisekelo ukuze ibhange lombuso laseNingizimu Afrika libe ngaphansi kwesandla sikaHulumeni, zombili lezi zincomo zachithwa enkantolo.
Kamuva nje u-Advocate uMkhwebane utholene phezulu noNgqongqoshe wezezimali uMnu uTito Mboweni omnuka ngokungayazi into ayenzayo emva kokukhipha izincomo ezithi uMqondisi Jikelele woMnyango ezezimali uDondo Mogajane akathathelwe izinyathelo emva kokuthola ukuthi wehluleka ukuveza ukuthi wake wavalelwa ejele phambilini ngesikhathi ehlolelwa ukulungela lo msebenzi.
Nakuba uMengameli uCyril Ramaphosa wayesevumile ukulandela izincomo zika- Advocate uMkhwebane kodwa uMboweni uthi uphikelela enkantolo ngalolu daba. Ukulwa nezintandokazi zikaHulumeni waseNingizimu Afrika uMnu uGordhan kanye noMboweni sekumenze wanyamanambana kwabaningi uNkk uMkhwebane. Okuphinde kumphikise kumveze njengongasilungele isikhundla sokulawula iHhovisi likaMvikeli WoMphakathi ukuthi ezincomweni ezingama-70 asake wazikhipha ezingama-38 zishaywa indiva ekubeni ezingama-21 zidluliselwe enkantolo. Lokhu sekwenze abaningi bakholwa wukuthi akasilungele esokuba uMvikeli WoMphakathi.
Uma kusetshenziswa ukuthi mingaki imibiko yakhe edluliselwa enkantolo abangagculisekile ngayo mhlasimpe kuzomele kwazeke ukuthi mangaki amacala adluliselwa ezinkantolo eziphakeme ngenxa yokungavumelani nesinqumo sikamantshi yenkantolo. Akuvamisile ukuthi kusetshenziswe isibalo samacala adluliselwe kwezinye izinkantolo ukuze kucace ukuthi imantshi iyawazi yini umsebenzi wayo, ukudluliselwa phambili kwamacala ngabangagculisekile kuyinto ejwayelekile ezinkantolo zaseNingizimu Afrika. Njengoba kubonakala sekubusa umbono wokuthi u-Advocate uMkhwebane akakulungele ukuba nguMvikeli WoMphakathi ngenxa yamacala adluliselwa ezinkantolo, kuyofanele kukhumbuleke ukuthi lokhu kuyinto eyejwayelekile nasezinkantolo zaseNingizimu Afrika kodwa ezingasetshenziselwa ukwahlulela izimantshi ekutheni ziyawazi noma kaziwazi umsebenzi wazo.
IPAC ibhinciswe kancono ukuze ikwazi ukungenela ukhetho
Amehlo athe njo eBukhosini naseMakhosini